पूर्वाधार पूरा नगरेको भन्दै काठमाडौं नेसनल शिक्षण अस्पताल बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस - News - Radioupatyaka
Studio Time (NPT) : 04:51:52 PM
अस्पताल सञ्चालनको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार पूरा नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं नेसनल शिक्षण अस्पताल बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ।
मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्डबिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको भनी विवादित उक्त कलेजको पूर्वाधार अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। समितिले राजधानीको घट्टेकुलोस्थित अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरी शनिबार स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले उक्त अस्पताल बन्द गर्न सिफारिस गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
छानबिन समितिमा डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, डा. गुणराज लोहनी, डा. भोलाराम श्रेष्ठ, औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक नारायण ढकाल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी डा. रुना झा, वीर अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट डा. स्वयंप्रकाश पण्डित, नर्सिङका तर्फबाट कविता अर्याल र मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा सदस्य छन्।
अपार्टमेन्ट बनाउन निर्माण गरिएको भवन किनेर चार वर्षअघि खोलिएको यो अस्पतालले सञ्चालन स्वीकृतिसमेत नलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्पतालको निम्ति पूर्वाधार पूरा नभएको, भवन अनपयुक्त रहेको, बिरामी नभएको र उपकरणहरू पर्याप्त नभएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो अस्पताललाई मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन दिएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विरोध भएको थियो। त्रिवि कार्यकारी परिषदको शनिबारको बैठकले तत्काललाई सम्बन्धन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।
मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डअनुसार नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न ३०० बेडको अस्पताल कम्तिमा तीन वर्ष नियमित सञ्चालन भइरहेको हुनुपर्छ।
नियमित चलिरहेको अस्पतालले १०० जना एमबिबिएस विद्यार्थी भर्ना लिन कम्तिमा ३०० बेडमध्ये १८० बेडमा नियमित बिरामी भर्ना भएको हुनुपर्छ। दैनिक अस्पताल आएर जाँच गराउने बिरामी संख्या ५ सय हुनुपर्छ। नेसनल मेडिकलले यी कुनै मापदण्ड पूरा गरेको छैन।
अस्पतालका नाममा होर्डिङ बोर्ड मात्र झुण्डाएर चार वर्ष बिताएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको ‘बिल्डिङ’ लाई त्रिविले कुनै निरीक्षणबिना एमबिबिएस पढाउने सम्बन्धन दिएको थियो। घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आएपछि वीरगन्जस्थित मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारी र बसरुद्दीन अन्सारीले यो भवन किनेका थिए।
माओवादी केन्द्रबाट संविधानसभा चुनाव लडेका बसरुद्दीन वीरगन्ज महानगरपालिकामा एमालेका मेयर उम्मेदवार हुन्।